Ciidamada Dowladda oo howlgallo ballaaran ka sameeyay Magaalada Marka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
18th December 2015 MAREEG Af Soomaali 0
Marka (Mareeg)—Howlgalladan ahaa kuwa ballaaran islamarkaana Dad badan lagu qab qabtay ayaa Ciidamada Dowladda Soomaaliya waxey ka sameeyeen Xaafado ka tirsan Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Sh.Hoose.
Ciidamada Dowladda ayaa howlgalladooda xooga waxey ku saareen Xaafadaha Buulo-Jaan iyo Ruuziyo ee Degmada Marka kadib markii Xalay Qaraxyo iyo Saaka halkaasi ay ka dhaceen Qaraxyo.
Howlgalladan maanta laga sameeyay magaalada Marka ayaa hakad geliyay isku socodka Gaadiid iyo Ganacsigii ka jiray halkaasi waxaana Dadka lagu xiray baaritaanadaasi su’aalo lagu weydiinayaa Xabsiga Dhexe ee Magaalada Marka.
Ugu dambeyn, Howlgalladan ay sameeyeen Ciidamada Dowladda ayaa yimid kadib markii tiro Bam gacmeed ahaa lagu weeraray Bar-koontarool Ciidamada Dowladda ay kaga sugan yihiin Magaaladaasi iyadoona xusid mudan in Shalay Magaaladaasi la geeyay Ciidamo badan oo isugu jira Militari iyo Nabad Sugida kuwaasi oo laga doonayo xaqiijinta amaanka Degmada Marka.
Ciidamo badan oo ka tirsan DFS oo la geeyay Marka i